Akwụkwọ sayensị kacha mma
Akwụkwọ 3 Oliver Sacks kacha elu
Mgbe akwụkwọ onye sayensị gbasara sayensị ya ghọrọ ụdị ndị na -ere ihe ọmụma, o doro anya na anyị nọ n'ihu onye edemede nwere mmasị ịtụgharị ihe ọmụma ya nye onye ọ bụla chọrọ ịkọwa, ọ bụrụgodi na ọ bụ igodo mbụ ma ọ bụ ntụgharị ya karịa. doro anya, na -adọrọ mmasị ...
Extraterrestrial, nke Avi Loeb dere
Aha zuru oke bụ "Extraterrestrial: Humanity na akara mbụ nke ndụ nwere ọgụgụ isi gafere ụwa" a ga -agụrịrị ya opekata mpe ugboro abụọ iji ghọta mkpa nkwupụta dị otu a. Mgbe ọtụtụ narị akwụkwọ akụkọ, ihe nkiri, ọgwụ psychotropic na ihe nzuzo NASA kachasị, ọ dị ka ...
5 akwụkwọ kacha mma gbasara mmekọahụ
Ebe ọ bụ na Dr. Ochoa pụtara na ihuenyo na mmalite 90s, mmekọahụ na mmekọahụ malitere ịga ije ọnụ na ụzọ ndị dị mkpa nke nkwupụta ndị ọzọ na-ewu ewu. Okwu gbasara mmekọahụ weere akụkụ nke oghere maka mkparịta ụka na nyocha (dị ka ihe ọ bụla na-egosi na telivishọn). Ihe…
Egwu kacha egbu egbu, nke Michael T. Osterholm dere
Akwụkwọ amụma nke buru ụzọ dọọ aka ná ntị megide nsogbu coronavirus. Akwụkwọ a, nke otu onye ọkachamara ụwa na -ahụ maka ọrịa na -efe efe dere, tụrụ anya na ọ ga -eji nwayọọ nwayọọ na -efe efe na -ada ụwa a. Mbipụta emelitere a gụnyere okwu mmalite nke nsogbu nke ...